အကောင်းဆုံး GJCNC-BB-S ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ။ | Gaoji
1. output ကိုအင်အားသုံး: 350Kn
၂။ မင်း U-shape ကွေးအကျယ် - 40mm
3. မက်စ်အရည်ဖိအား: 31.5Mpa
၄။ Max Busbar အရွယ်အစား - 200 * 12mm (ဒေါင်လိုက်ကွေးခြင်း) / 12 * 120mm (Horizontal bending)
5. ကွေးကောင်းကင်တမန်: 90 ~ 180 ဒီဂရီ
GJCNC-BB စီးရီးများသည် busbar workpiece ကိုထိထိရောက်ရောက်နှင့်တိကျစွာကွေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
CNC Busbar Bender သည်ကွန်ပျူတာမှထိန်းချုပ်သောအထူး busbar-bending processing ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ X-axis နှင့် Y-axis ညှိနှိုင်းခြင်း၊ manual feed လုပ်ခြင်းဖြင့်စက်သည်အမျိုးမျိုးသောကွေးသောလုပ်ရပ်များကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသော dies များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဒေါင်လိုက်ကွေးခြင်းများကိုအဆုံးသတ်နိုင်သည်။ စက်သည်ကွေးနေသောအရှည်အရှည်ကိုတိကျစွာတွက်ချက်နိုင်သော GJ3D software နှင့်တိုက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်ကွေးခြင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာလိုအပ်ပြီးပရိုဂရမ်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်သိရှိစေရန်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကွေးသောလမ်းကြောင်းကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဤစက်သည်ထူးခြားသောပိတ်ထားသောအမျိုးအစားကွေးသောဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည်ပိတ်ထားသောအမျိုးအစားကွေးခြင်း၏ပရီမီယံပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအမျိုးအစားများအတွက်လည်းအဆင်ပြေသည်။
အဆိုပါကွေးယူနစ် (Y- ဝင်ရိုး) ကထောင့်အမှားလျော်ကြေး၏ function ကိုရှိပြီး၎င်း၏ကွေးတိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်စံတွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။ ± 01 °။
GJ3D ပရိုဂရမ် software
အလိုအလျောက်သင်္ကေတပြုလုပ်နိုင်ရန်အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ GJ3D ကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲသည် busbar အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးအတွင်းမှာနေ့ရက်တိုင်းကိုအလိုအလျှောက်တွက်ချက်ပေးနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လက်စွဲစာအုပ်အမှားကြောင့်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်တယ်။ ပထမဆုံးသောကုမ္ပဏီသည် 3D နည်းပညာကို busbar အပြောင်းအလဲအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည်နှင့်အမျှ software သည်ယခင်ကထက်ပိုမို ရှင်းလင်း၍ အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် 3D model ဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။
လူ့ - ကွန်ပျူတာကြားခံစနစ်သည်ရိုးရှင်းပြီးပရိုဂရမ်၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြနိုင်သည်။ စက်၏နှိုးစက်သတင်းအချက်အလက်ကိုပြသနိုင်သည်။ ကအခြေခံသေ parameters တွေကိုသတ်မှတ်နှင့်စက်စစ်ဆင်ရေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောလမ်းညွှန်၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ထိရောက်သော၊ ကြာရှည်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဆူညံသံတို့နှင့်ပေါင်းစပ်။ မြင့်မားသောဘောလုံးဝက်အူဂီယာကို။
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (kg) 2300 အတိုင်းအတာ (mm) 6000 * 3500 * 1600
အများဆုံးအရည်ဖိအား (Mpa) ၃၁.၅ အဓိကပါဝါ (kw) 6
output စွမ်းအား (kn) 350 ကွေးဆလင်ဒါ၏အမြင့်စတော့ (မီလီမီတာ) 250
အမြင့်ဆုံးပစ္စည်း (ဒေါင်လိုက်ကွေး) 200 * 12 မီလီမီတာ အမြင့်ဆုံးပစ္စည်း (Horizontal Bending) 120 * 12 မီလီမီတာ
ကွေးခေါင်း၏အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (m / min) ၅ (အစာရှောင်ခြင်းမုဒ်) / ၁.၂၅ (အနှေး mode) ကွေးနိုင်အမြင့်ဆုံး (ဒီဂရီ) 90
ပစ္စည်းနှစ် ဦး နှစ်ဖက်၏အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (m / min) 15 ပစ္စည်း၏ဘေးတိုက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု (X ဝင်ရိုး) 2000
ကွေးတိကျမှု (ဒီဂရီ) Auto compensation <±0.5Manual compensation <±0.2 မင်း U-shape ကွေးအကျီင်္ (mm) ၄၀ (မှတ်ချက်။ ။ သင်သေးငယ်သော type လိုအပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ )